Abesifazane izibhamu: isiko kanye yesimanjemanje. imodeli Uhlolojikelele
Gun, ngokuthi, izintokazi, sifana ithoyizi enhle kuphela. Empeleni, kuba izikhali eziyingozi futhi zibangele ukufa imbala. Cabanga indlela edume "UWalter", "West", "Brownings" futhi izindlela zabo yesimanje.
Kuyini isibhamu womfazi lo
Ladies, Vest, gumbi noma ephaketheni amavolovolo - idivayisi wosayizi omncane, ogama njongo - ukuze sife ezifihlile, ngokungafani, isibonelo, kusukela isikhali umbutho wamaphoyisa. Okunjalo amavolovolo encane osezingeni uyalandisa isikhali chambered .25 ACP, amandla kabani nomlomo 20% of the Parabellum okujwayelekile (9h16 mm).
isikhali aphathwayo ikakhulu isetshenziselwe izinjongo ezimbili: ukuzivikela kwezakhamizi spare komthetho isibhamu bezobunhloli. Indlela yesibili yokuthi isibhamu esincane zabesifazane isebenzisa izinhlobo efanayo cartridges, njengoba for the main amaphoyisa inkonzo isikhali nezempi.
Eyokuqala ephaketheni amavolovolo uvele ekhulwini XIX - ngukhokho kubo iyona "Derringer" (igama livela ungumdali amagama lezi zikhali - H. Derringer). Ngenxa emgqonyeni yakhe eyathatha isikhathi esifushane wabanika isidlaliso "Bulldog". Iyunithi laba yintandokazi ngokushesha kwabaningi eYurophu nase-US ngenxa alula, ukuthembeka, ukuthwala, namandla eliphezulu. By endleleni, futhi lanamuhla ezithule imodeli "derringer" ikhonze ngokufanele the Russiisevisi imfihlo kanye nezobunhloli.
Izici ephaketheni amavolovolo
Thina silithinte izici eziyinhloko oluhlukanisa esincane amavolovolo:
Ergonomics. Ifomu izikhali ezinjalo njalo eshelelayo, elingenalo tu- izakhi - isibhamu kuyoba engenamsebenzi uma ubambeke ku-ephaketheni noma lihlale izingubo phansi. Leli qembu izando kanye iziyisikhombisa esikhundleni izinkinobho, fuses athuthele lapho kunzima ngephutha ubuhlungu, noma azikho - self-cocking isibhamu design.
Ukusebenzisa cartridges we osezingeni efanayo ukuthi isikhali inkonzo. Okunjalo ukwanda nomthamo isibhamu labesifazane akukuniki yisiphi isizathu silihlobanise ithoyizi.
indlela. I-Miniature Lesi sici kuholela ngokuphazamisa sobala - isibambo ngesinye isikhathi kunzima ukugcina umunwe kancane. Abakhiqizi ixazululwe le nkinga ngezindlela ezahlukene - bude esitolo ukuguquguquka ke phambili bese phansi ngaphansi ekamelweni.
Ladies ' isibhamu "UWalter" - Classic esincane izikhali. "UCarl Walter Vaffenfabrik", eyasungulwa ngo-1886, waqala ukuveza amadivayisi anjalo 1911. Futhi kwaba ephaketheni amavolovolo alethwe inkampani udumo emhlabeni wonke.
Zonke badedelwa onobuhle ezinhlanu mini-pistols "Walter":
Okokuqala kuyinto compact futhi kalula, kwadingeka evulekile yesivalo-bezinhlamvu uhlobo eshaywayo indlela. Isitolo wawusegunjini 6 bafika of 6.35 mm.
Le nguqulo esilandelayo, lobunikazi ngo-1913, kwadingeka isibangeli ezifihlekile, futhi konke kuba inkomba khona amacala ekamelweni.
Le nguqulo wesithathu isibhamu esincane "UWalter" kwaba rarity (amayunithi 3500 kuphela ekhiqizwa). It efakiwe ukwanda osezingeni ukuze 7,65 mm futhi kwadingeka ecasulayo icala emikhonweni sasikhipha ngefasitela uhlangothi, yangena ensimini Ngenxa umcibisholo, kukuphazamise kuye.
Le nguqulo yesine kwakungu Analogue vosmipatronnym lwesithathu kwahluka disassembly elilula futhi emgqonyeni enwetshiwe.
Imodeli zakamuva - inguqulo ethuthukisiwe ye-edition wesibili, kodwa ezingaguquki kuphela ngokuphelele futhi ezine rifling e umgqomo nesibhamu.
Popular esincane isibhamu Spanish "Vesta" libhekisela eybarskomu uhlobo (Eibar - edolobheni iSpanishi, inhlokodolobha wangaphambilini we-izikhali zangempela kwekhulu XX). Le divayisi othomathikhi has a ubukhulu 6.35 mm noma 7,65 mm, esitolo amacala 6.
Umehluko omkhulu phakathi 'West "kwaba indawo yabalindi inhlamvu, phakathi. Kuzo zonke ezinye isibhamu safana Browning ziyaphawuleka, okuzoxoxwa olwengeziwe.
Design Belgian John Browning kuye kwasusa umgoqo yangempela izingalo embonini izintokazi 'ekuqaleni kwekhulu XX. "Browning Baby" yakhululwa ngo-1906. Okuncane isibhamu ubude babuyizingalo 114 mm yayilingana indinganiso izikhali ezinjalo - 6.35 mm. isibhamu Ladies ' "Browning" lasetshenziswa kwaze kwaba ngu-1930, ama-iRed Army, kuze kuthiwa lathathelwa indawo efanayo namaSoviet "Korovin".
ukukhiqizwa serial nenganono "Browning" yaphela nge ekuqaleni kweMpi Yezwe II. Ngesikhathi it wadedelwa mayelana amakhophi angaphezu kwesigidi e izikhali. Imodeli isibe prototype sokuthuthukiswa gunsmiths eziningi kusuka eU.S., Spain, eJalimane nakwamanye amazwe.
amavolovolo Modern compact
Cabanga phezulu izintokazi eziyishumi ethandwa kakhulu 'izibhamu kube yimanje:
Ruger LC9s - kancane kuka-15 intshi isibhamu, enesisindo 487 g, nge ubukhulu 9 mm. Esitolo sakhe ibekwe 7 + 1 imizuliswano.
Glock 42 - i-polymer nge ephathwayo isikhali emehlweni ngoba trehtochnym .380 osezingeni cartridges. Yakhelwe 6 +1 imizuliswano.
Springfield Ibanga Officer Compact isibhamu kubhekwa premium. Ukuze ukukhiqizwa yayo usebenzisa hydrocarbon steel, aluminium ingxubevange. Fly izikhali ezenziwe fibre. I isibhamu esifanelana amacala 6 +1 .45 ACP.
M & P Bodyguard 380 Crimson Trace - imodeli yomenzi, has uhla ezinonileyo izibhamu ephathwayo - Smith & Wesson. Lokhu isibhamu self-cocking nge umagazini 6 +1 ubhekwa ephephile, futhi isibambo yayo nge namantombazane ngokuba iminwe nokubamba "amazenga enhlanzi" - elula kunazo.
M & P Bodyguard 38 Revolver Crimson Trace - iyinhlangano self-Leli qembu kakade nge isigubhu for 5 emahlandla. Abakhiqizi qinisa ukuthi isibhamu-16.7 intshi njengoba enamandla njengoba zakudala.
Kimber Solo Carry - izinga isibhamu ngoba cartridges osezingeni 9 mm, namandla 6 +1 imizuliswano. Inani 14 cm Sici Its esiwuphawu iyona umzimba camera idayimane-like enamathela, okwenza isibhamu cishe imperceptible .. - Kudivayisi Ubude
Taurus 85VTA Buka - elihle 5-round isibhamu nge esobala ohlangothini Uhlaka, igolide plated futhi we-chrome kuhlinzwa inhlamvu inhlamvu. Ukuze wenze lokhu izikhali ezidingekayo cartridges .38 osezingeni Special.
Desert Eagle 1911U - inhlamvu silingo hook ke kulinganiswa kg 1.5 kuphela. Isitolo kunesithembiso 6 +1 .45 osezingeni ACP.
Walther CCP - inhlanganisela zakudala kanye emisha, housings eyodwa noma ezimbili-anemibala. Magazine nomthamo 16-isentimitha isibhamu - 8 +1 icala 9mm.
I noSauer P238 SIG Extreme - imodeli zithandwa phakathi amaphoyisa aqapha. Uhluka futhi sizikhandle eliqhele fuse. Ubude - 14 cm ngesikhathi umthamo isamba esitolo 1 + 7.
Abesifazane izibhamu iyaqhubeka ithandwa namuhla. Isizathu salokhu wukuthi ubuchwepheshe yesimanje ngibanikile eziningi izici evumela lezi Amadivayisi amandla is hhayi vuma izingalo okukhulu ngaphezulu.
Esiginali amavolovolo - ngomlando wabo kanye nencazelo
Indlela ukukhetha etendeni: esisebenzayo izivakashi
.30-06 osezingeni mm, izici zayo. Izibuyekezo mayelana isikhali osezingeni .30-06
Imiyalelo "Gonal-F." Incazelo lokulungisela Izimo, analogs kanye nokubuyekeza
Malta ifulege nomlando wayo
Izwe entendeni noma yini smartphone
Izidakamizwa "Urorek". Yokusetshenziswa
Garden Palmiye Ihhotela Side 3 * (Turkey / Side) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa